Wholesale akatungamirira Fluorescent Light-Aluminum Manufacturer uye Pricelist | Ristar
Akatungamirira Fluorescent Light-Aluminum
Aluminum 40W Fluorescent Chiedza Features: 1.Use aruminiyamu mukuru-sosaiti, hwakakwana chafariz conductivity nokupisa nemwaranzi. 2.High unhu Stainless simbi shrapnel, zvakanaka yakamisirwa mugumisiro. 3.High chiedza transmittance, kufanana kwakaita luminance zvakanaka. 4.Dustproof uye zvakanaka Anti-bvungapfunga unongotaura. 5.High unhu vakapiswa akatungamirira machipisi, yakakwirira luminous. 6.Simple yokugadza, siyana kugadzwa nzira: 1) Hanging waya chokugadza 2) Installation nokushandisa Hardware shrapnel 3) Group kugadzwa. Mumwe nomumwe conne ...
Aluminum 40W Fluorescent Chiedza Features:
1.Use aruminiyamu mukuru-sosaiti, hwakakwana chafariz conductivity nokupisa nemwaranzi.
2.High unhu Stainless simbi shrapnel, zvakanaka yakamisirwa mugumisiro.
3.High chiedza transmittance, kufanana kwakaita luminance zvakanaka.
4.Dustproof uye zvakanaka Anti-bvungapfunga unongotaura.
5.High unhu vakapiswa akatungamirira machipisi, yakakwirira luminous.
6.Simple yokugadza, siyana kugadzwa nzira:
1) Hanging waya chokugadza
2) Installation nokushandisa Hardware shrapnel
3) Group kugadzwa. Mumwe nomumwe chokuita kuziva chero graphical muenzaniso magadzirirwo.
8.Widely kushandiswa indoor ezvinhu zvose.
Previous: Akatungamirira Mafashamo Light-RS PJ 100 SMD
Next: Akatungamirira Fluorescent Light-Iron
Fluorescent Lighting yechigarire
Akatungamirira Fluorescent Light
Akatungamirira Fluorescent Lighting
Akatungamirira Fluorescent Light-Iron
Akatungamirira Fluorescent Light-Square
Akatungamirira Cob Flood Light, Akatungamirira Solar Rechargeable Flood Light, Akatungamirira Floodlight 30w, Ceiling Led Panel Light , Philips 3030 akatungamirira Flood Light, akatungamirira Tri-Zvinoratidza Light yechigarire ,